बंगलादेशमा बढ्दै कोभिड संक्रमित !! - कान्तिखबर – सम्पुर्ण समाचार हामीसँग
९ माघ २०७७, शुक्रबार , ०२:२०
बंगलादेशमा बढ्दै कोभिड संक्रमित !!
२०७७ मंसिर २, मंगलवार ०८:५९ गते
बंगलादेशः बंगलादेशमा पनि पछिल्लो समयमा कोभिड-१९ का संक्रमितहरु बढ्दै गएको बताइएको छ । आइतबार मात्र १ हजार ८३७ जना संक्रमित भेटिएका बताइएको छ । बंगलादेशमा शुरुमा कोभिडका संक्रमित नदेखिएको भए पनि अहिले बढ्दै गएका छन् ।
यहाँ अहिलेसम्म ४ लाखभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । बंगलादेशमा आइतबारसम्म ४ लाख ३२ हजार ३३३ जना संक्रमित भएका छन् । यहाँका ३ लाख ४३५ जना संक्रमित निको भएका छन् । बंगलादेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यहाँ १.३४ प्रतिशत नागरिकको मृत्यु भएको छ ।
कोरोना ताजा प्रदेश ३
नेपालमा कोरोना खोप भोलि नै आउने
२०७७ माघ ७, बुधबार १४:४५ गते कान्तिखबर
आज चन्द्रागिरी हिल्सको आईपीओ बाँडफाँट,